Home | The Station
We accept ESewa and IME pay at 9856020181.
The Station Food Club
Where food meets the love.
Find good food here
Fluffy on the inside and crispy on the outside.
पोखरा विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तब्य हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण पोखरामा विगत १५ वर्ष देखि ग्राहकको मन जित्दै आएको स्टेशन द फुड क्लब एण्ड ससेज पार्क उहि स्वादमा उत्कृष्ट स्वरुपका साथ पोखराको गैह्रापाटनमा अवस्थित रहेको छ । ग्राहकको माग अनुरुप सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको स्टेशनले चिप्लेढुङ्गा निभा गल्लीबाट सेवा शुरु गरेको हो । ८ वर्ष उक्त स्थानमा सेवा सञ्चालन पश्चात गैह्रापाटनमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । फास्टफुड खाजाका परिकारका लागि परिचित स्टेशन मुलतः मःम, चाउमिन, ससेज, आलुका लागि प्रख्यात रहेको छ । यसका अलावा नया परिकारका रुपमा ग्राहकहरुले झिरलाई पनि मन पराएका छन् । स्टेशनमा चिकेन् विँग्स, चिकेन् लेग, पिज्जा, बर्गर, फ्रेन्च फ्राइ, बिरयानी, थुप्पा लाई मेनुमा समाबेश गरेका छौं । सबै बर्गमा परिचित स्टेशन युवा वर्गका खाजाका लागि लोकप्रिय डेस्टिनेशन हो । स्टेशनको अहिलेको स्वरुपमा हामीले निकै परिमार्जन गरेका छौं । स्टेशनको सबै तल्लाहरुमा हामीले थ्रिडी र ग्राफिटी आर्टले सजाएका छौं । हरेक टेवल फोटो खिच्ने स्टुडियोको आभास पाउन सकिन्छ । भुँइ तल्लामा काउन्टर सहित नो स्मोकिङ्ग जोन रहेको छ । पहिलो तल्लामा ओपन किचनका साथ बसेर खान मिल्ने स्पेस रहेको छ । दोस्रो तल्लामा सेपरेट टेवल, कमन टेवल तथा स्विङ्ग रहेका छन् । स्विङ्गमा झुल्दै पनि खाजा खान सकिन्छ । यसै गरि छतमा पोखराको सुन्दर भ्यु, हिमालको दृष्यावलोकन का साथ ओपन स्पेसको मज्जा लिन सकिन्छ ।
जमाना रेडियोको थियो । जमात पनि रेडियो सुन्नेहरु कै । पोखरा एफएममा एक जना आरजे थिए । आयुष श्रेष्ठ । स्वर फिट, कार्यक्रम हिट । युवा पुस्तामा लोकप्रिय थिए उनी र उनको कार्यक्रम स्टेशन पप । रेडियोले जीवन त धानिन्थ्यो तर रहरहरु धानिदैनथ्यो । आयुष श्रेष्ठ, नामका लागि भन्दा कामका लागि रेडियोमा जोडिएका थिए । उनले त्यहाँ काम भन्दा नाम नै बढि पाए । नामलाई काममा बदल्न चाहन्थे उनी । तर लगानी गर्ने पैसा थिएन । साथीभाइसंगको सरसापटमा पोखरा एफएमकै अगाडी खुल्यो उनको काम । ठेलामा तात्तातो मःम, ससेज र आलु । रेडियो सुन्ने र उनलाई स्टेजमा कार्यक्रम चलाउदा देख्नेले भन्थे । आरजेले रोडमा मःम बेच्दैछ । आयुष बेपर्बाह थिए । यसो भन्दा उनलाई लाज लागेन । किनकि उनी कामलाई पुजा मान्थे । काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास राख्थे । सपना प्रति अडिग थिए । रोडको कामले ग्राहकको मागलाई धान्न सकेन । उनले निभा गल्ली मा एउटा सटर भाडामा लिएर रेष्टुरेण्ट गरे । नाम दिए आफ्नै रेडियो कार्यक्रम स्टेशन पपबाट । स्टेशन । केही समयपछि त्यहाँ पनि ग्राहकको भिड बढ्न थाल्यो । सानो सटरमा ग्राहकको भिड अटाउन सकेन ।
उनकै आग्रहमा घरबेटी कपिल कोइरालाले सोही सटर भन्दा तल अर्को फराकिलो ठाउँ बनाइदिए । पहिले भुँइ तल्लामा मात्रै सञ्चालित त्यहाँ पनि पछि माथिल्लो तल्लामा पनि फैलन पर्यो । सो स्थानलाई छोडेर स्टेशन गैह्रापाटन आयो । जता स्टेशन त्यता ग्राहक भने झैं गैह्रापाटनमा पनि स्टेशनले उत्तिकै सफलता हासिल गर्यो । गैह्रापाटनको पहिलाको लोकेसनकै आडैमा ३ तल्ला पुरै घरमा अहिले स्टेशनले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । पोखरामै पहिलो पटक थ्रिडी तथा ग्राफिटी चित्रका साथ ग्राहकको मन जित्न तल्लिन स्टेशनको कुनै पनि शाखा रहेको छैन । तर पनि यसको ख्यातीका कारण अगाडी पछाडी उपमा झुण्डाएर यस्तै खालका रेष्टुरेण्ट भने पोखरामा खुलेका छन् । स्टेशनले भविष्यमा पोखरा बाहिर तथा देश बाहिर पनि फ्रेन्चाइजी मार्फत सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
बर्दियाको एउटा कुनाबाट एसएलसीको सर्टिफिकेट बोकेर जोशिलो युवा आइपुग्छन् सुन्दर नगरी पोखरा । पोखरा आउनु अघि नै अनेक हण्डर र असफलता झेलीसकेका उनले नैराश्यताका अनेक बादल खेपेर खाडीको मरभुमीको राप पनि भोगिसकेका थिए । फ्रेसहाउसमा मासु काट्ने देखि लिएर अरुकै पसलमा काम गर्ने अनुभव पनि उसले संगाले । धेरै तिक्तताका विच पनि उनको आँखामा उज्यालो संधै हुन्थ्यो । आशाको उज्यालो । परिश्रमको उज्यालो । कामको उज्यालो । भनिन्छ नि, यदि तिमी दौडन सक्दैनौ भने पनि हिंडी रहनुपर्छ । अनि मात्रै गन्तब्य भेटाइन्छ । आयुष श्रेष्ठ आफ्नो गन्तब्य भेटाउन थकानलाई विर्सेर हिंडिरहे । रेडियोसंग जोडिए । साथीभाइसंग जोडिए । कहिले हौसला मिल्यो । कहिले तिरस्कार । तर पनि केही गर्ने अठोटको हुटहुटी कहिल्यै मरेन । निरन्तर अगाडी बढिरहे ।
रेडियोको क्रेज गतिलो थियो । मान्छे रेडियोमा बोल्ने मान्छेलाई अलग तरिकाले हेर्ने गर्थे । तर पनि रेडियोको जागिरले भने जेनतेन खान लाउन पुग्थ्यो । यस्तो बेला अरु कामको विकल्प पनि आवश्यक थियो । कुनै पनि काम गर्न पछि नपर्ने आयुष अचानक ठेलामा मम, चाउमिन, ससेज, आलु लिएर देखा परे । आरजेले रोडमा मम बेचेको देखेर उनका श्रोता पनि झुम्मिन थाले । अचम्म माने । तर आयुषले अचम्म मानेन । रेडियोमा कार्यक्रम मार्फत नया टेस्ट दिएका आयुषले सडकको ठेलामा ममलाई चटनीको नया प्रयोगले नया टेस्ट दिए । उनको चटनीको रेसिपी पनि गज्जबको छ । खुर्सानी र चिनीको मिश्रणमा अन्य थुप्रै मरमसाला । हरेक परिकार स्वादिलो बनाउन यो चट्नी बरदान सावित भएको छ । सबै युवा पुस्ता स्टेशनको चट्नी भने पछि मुखमा पानी आयो भन्छन् । खाजाका परिकार त सबैले बनाउछ तर स्टेशनमा बन्ने परिकार फरक रेसिपीमा बन्ने गर्दछ । ग्राहकको खोजाइ र रोजाईलाई नै स्टेशनले आफ्नो मुल मन्त्र मानेको छ । १५ बर्षमै स्टेशन पोखरामा मःमको ब्राण्ड बनेको छ भने आयुष र स्टेशन एक अर्काको पर्याय । आयुषकै कारणले स्टेशन चले अनि स्टेशनकै कारणले आयुष ।
Best Fast food in the Pokhara.
Come to us for good food andalively environment.